Gachon University - Study na South Korea. Higher Education ná Mba Ọzọ
tọrọ ntọala : 1939
Echefukwala discuss Gachon University
A mahadum bụ a home, a ebe a na-amụrụ ihe ọgụgụ isi na-ozuzu umu na ihe ọmụma na amamihe. Mgbe a mahadum ịga nke ọma na-adabere na àgwà na-eme n'ọdịnihu rụzuru nke ya ụmụ akwụkwọ, dị otú ahụ ihe ịga nke ọma kpom kwem.
The mahadum ga-ike na kasị mma gburugburu ebe obibi maka agụmakwụkwọ, ebe nwere nke ụmụ akwụkwọ nwere ike-awa okooko.
Ọ bụ ezie na Gachon University wee site ụfọdụ siri ike na n'oge gara aga, anyị imeri ha na a ọhụrụ ọhụụ ịgbanwe mahadum n'ime a prestigious alụmdi.
Anyị bụ ndị mbụ Korean mahadum na-emeghe a College of BioNano Technology, bụ nke ghọrọ ezi ihe nlereanya ikpe ndị ọzọ ngalaba.
Mgbe m na-etinye na-ahụ maka ijikwa na University, M ekwele nkwa na “Gachon University ga-otu n'ime ndị 'Top 10 Private Universities’ na mba n'ime afọ ole na ole.”Ọ bụghị nanị na m ada site na nke a nkwa, M ga-ewere ya n'ihu, na-ahụ na mahadum na-aghọ otu n'ime ụwa kasị prestigious oru.
M olileanya na ndị niile na ịga na homepage ga-amata na Gachon University ọhụụ maka ibu na ihe ịga nke ọma na narị afọ nke 21.
Ọ bụ ezie na ọ na kemgbe 20 afọ kemgbe ntọala, Gachon University ga iputa dị ka ihe mba ma ama mahadum na-adịghị anya.
Gachon University e kere dị ka a N'ihi nke mmakọ nke abụọ dị afọ 4 mahadum, nke bụ ihe mbụ bụrụ na nke ndị dị otú ahụ a mmakọ na Korea. Ọ tụrụ aro na ọhụụ maka ọdịnihu iji kọwaa ihe ga-eme n'ọdịnihu-ele ihe anya nke ụlọ akwụkwọ, na ekpokọtara ike nke òtù nile nke University ma si otú maximizes ndị Synergy mmetụta nke mmakọ.
Dabere na ẹdude ọhụụ nke ụlọ akwụkwọ–“Emepe emepe zuru ụwa ọnụ talent na agwa”–ọhụrụ paradigm e aro iji ruo ihe mgbaru ọsọ nke ụlọ akwụkwọ ọhụrụ–“Ịghọ otu n'ime n'elu 10 zuru ụwa ọnụ mahadum site 2020”–na guzosie ike kpọmkwem atụmatụ maka University.
Dept. of Mathematics & ozi
Dept. of Energy & Ozi teknụzụ
Dept. of Sports & ntụrụndụ Studies
Division nke Nursing
Ị chọrọ discuss Gachon University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews